Thursday June 22, 2017 - 14:56:29 in Wararka by Super Admin
Bayaan kasoo baxay Jamaacada "U hiilinta Islaamka iyo Muslimiinta" ee Dalka Maali ee hoostaga Ururka Al-Qaacidda ee Bilaadul Maghrib Al-islaami ayaa waxay ku faah faahiyeen weerar ay maalmo ka hor ku qaadeen mid ka mid ah Saldhigyada Ciidamada Dowladda Maali ay ku leeyihiin galbeedka magaalada Tembaktu.
Weerarka waxa uu dhacay 22-kii bishan Ramadaan oo ku beegneyd 17-kii Juun, iyadoona Bayaanka lagu sheegay in xoogaga islaamiga ah ay beegsadeen Saldhig Ciidan oo kuyaalla deegaanka "Biitaango" oo qiyaastii 80 Km galbeedka kaga beegan magaalada Tembaktu ee dalka Maali.
Dagaal muddo socday kadib ayay islaamiyiinta waxaa u suura gashay inay la wareegeen gacan ku heynta Saldhigga, kadib markii ay halkaas ka firxadeen Askartii ku sugneyd, xoogaga weerarka qaaday waxay dileen ku dhawaad 20 Askari, iyagoona soo ghaniimeystay gaari dagaal, islamarkaana gubay 7 kale, sidoo kale waxay gacanta ku dhigeen hub iyo saanado kala duwan oo ay ka mid yihiin Madaafiicda loo yaqaano BM-ka iyo kuwa lidka diyaaradaha.
Sida Bayaanka lagu sheegay, xoogaga Jihaadiga ah ayaa inta aysan goobta kasoo bixin waxay dab qabadsiiyeen guud ahaan Saldhigga, iyadoo howl-galkaas uu ku shahiiday mid ka mid ah Ciidamada Mujaahidiinta, halka dhowr kalena ay ku dhaawacmeen.
Bayaanka kasoo baxay Jamaacada " U hiilinta islaamka iyo Muslimiinta" ee Dalka Maali waxaa sidoo kale lagu sheegay in howl-galkani uu kusoo beegmayo iyadoo todobaadkii lasoo dhaafay ay weerarro kala duwan ka fuliyeen qaar ka tirsan deegaannada hoos yimaada magaalada Tembaktu, waxaana mid ka mid ah weerarradaas oo qaraxyo loo adeegsaday lagu bur buriyay laba gaari oo ay lahaayeen Ciidamada ka socda Gaalada Qaramada Midoobey ee loo yaqaano "Minsuma".
Qarax kale oo ka dhacay inta u dhaxeysa degmooyinka "Asungo" iyo "Mankaa" ayaa sida Bayaanka lagu sheegay waxay Mujaahidiinta ku bur buriyeen gaari Xamuul ah oo ay lahaayeen Ciidamada Dowladda daba dhilifka ee Maali.